RAYSAL WASAARAHA ITOOBIYA OO SI DIIRAN UGU QAABILAY XAFIISKIISA GUDOOMIYAHA XISBIGA KULMIYE IYO WEFDIGI LA SOCDAY |
RAYSAL WASAARAHA ITOOBIYA OO SI DIIRAN UGU QAABILAY XAFIISKIISA GUDOOMIYAHA XISBIGA KULMIYE IYO WEFDIGI LA SOCDAY
Addis Ababa(GNN)-Raysal-wasaaraha dalka Itoobiya Md. Hailemariam Desalegn ayaa qaabilaad heerkeedu sareeyey maanta xafiiskiisa ku soo dhoweeyey Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wefdigii uu hogaaminayey ee xukuumada Somaliland ka tirsanaa, oo maalintii salaasadii martiqaad rasmi ah ay ka heleen socdaal ku tegay dalkaa.
Kulankan Raysal-wasaaraha Itoobiya Md. Desalegn & Gudoomiyaha Kulmiye Mr. Biixi ee maanta oo Safiir-xigeenka safaarada Jamhuuriyada Somaliland ku leedahay dalka Itoobiya Amb. Ayaanle Salaad Diiriye u xaqiijiyey tifatiraha shabakada Somalilandspan, Maxamuud Cali Walaaleeye, ayuu raaciyey inay ka qeybgaleen Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi & dhamaan xubnahii wefdiga Somaliland ee Socdaalka ku joogay dalka Itoobiya, halka dhinaca Itoobiyana ku wehelinayeen Raysal-wasaare Md. Desalegn wasiiro ka tirsan xukuumadiisa.
Kulanka oo saacado badan qaatay, isla markaana labada dhinac kaga wada xaajoonayeen xidhiidhka iyo iskaashiga u dhexeeya labada wadan, ayaan tafaasiil dheeraad ah oo la xidhiidha, saacadaha soo socda ugu soo gudbin doonaa akhristayaasha sharafta leh.
Qaabilaada Raysal-wasaaraha Itoobiya ee wefdiga uu hogaaminayey Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md Muuse Biixi Cabdi ayaa imanaya sidaan warkii shalay hore idiinku soo gudbinay;
Musharaxa Madaxweynaha Ee Xisbiga KULMIYE ahna Gudoomiyaha Xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi Abdi ayaa soo dhoweyn heerkeedu sarrayso la sheegay inuu kala kulmay xukuumada Itoobiya, martiqaad rasmi ah uu ka helay Raysal-wasaaraha Itoobiya Md. Hailemariam Desalegn.
Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE. Md. Muuse Biixi ayaa la sheegay in qolka martida (VIP) ee garoonka diyaaradaha ee caasimada Addis Ababa uu ku soo dhoweeyey Wasiirka Gaadiidka Itoobiya Mr. Axmed Shide iyo madax ka socotay xukuumada Itoobiya, sida uu xaqiijiyey safiir-xigeenka safaarada Somaliland ee dalka Itoobiya Mr. Ayaanle Salaad Diiriye.
Mr. Biixi ayaa la filayaa inuu maanta kulan rasmi ah la qaato Raysal-wasaaraha Itoobiya Md. Hailemariam Desalegn, oo martiqaad rasmi ah uu u fidiyey Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE ku tegay dalka Itoobiya, isagoo hogaaminaya wefdi xukuumada Somaliland ka tirsan.
Kulanka Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Md. Muuse Biixi iyo Raysal-wasaaraha Itoobiya Md Desalegn ayaa la filayaa inuu ka soo baxo natiijo wax weyn ka tari doonta xidhiidhka iyo cilaaqaadka labada wadan iyo labada shacab wadaagaan, isla markaana dib idiin soo tebin doonaa insha alaah waxii ka soo baxa.